DHAGEEYSO:- Sheekh Maxamed Macalin oo ka warbixiyay xarig ay u geeysatay dowladda Soomaaliya.
on September 19 2013 Xoghayaha guud ee ururka Xisbul Islaam Maxamed Macalim ayaa faah faahin dheeraad ah ka bixiyay xabsi habeen ka hor lagu xiray, halkaas oo uu ku xirnaa muddo saacado ah ka dib markii ay ciidamada nabadsugidda halkaasi ku xireen.
Sheekh Maxamed Macalin ayaa sheegay in markii la xiray ka dib uu ku baryay xabsiga, isagoona sheegay in markaasi ka dib la weeydiiyay su�aalo u badnaa arimo uu kaga hadlay shir jaraa�id uu dhawaan ku qabtay magaalada Muqdisho.
DHAGEEYSO WAREEYSIGA SHEEKH MAXAMED MACALIN
Wuxuu Sheekh Maxamed Macalin sheegay in amarka xarigiisa uu ka dambeeyay taliyaha hay�adda nabadsugida ee gobalka Banaadir Maxamed Aadan Koofi, kaas oo uu sheegay inuu su�aalo weeydiiyay kadibna lasoo sii daayay, iyadoo wax dhib ah iyo handadaad aan loo geysan.
Sheekh Maxamed Macalin ayaa wuxuu sheegay su�aalaha la weeydiiyay inay ka mid ahaayeen arimaha ku aadan shirka jaraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho, kaas oo uu kaga dhawaaqay in xisbiga uu magaalada shir uga furmay, iyadoona arintaas ay dowladda u keentay shaki, maadaama ururkooda lagu ogaa inay yihiin urur hubeeysan.